इरानमा पुरुष भेषमा रङ्गशाला पसेका युवतीहरुको फोटो भयो भाइरल » खबरहरुको एउटै केन्द्र
इरानमा पुरुष भेषमा रङ्गशाला पसेका युवतीहरुको फोटो भयो भाइरल
मंगलवार, बैशाख १८, २०७५ १२:१६ मा प्रकाशित !
एजेन्सी– इरानस्थित रङ्गशालामा पाँच युवतीले पुरुषको भेषमा खिचेको तस्विरहरु अहिले संसारभर भाइरल भएको छ । त्यो देशको इस्लामिक कानुनअनुसार यो कार्य निषेधित छ । नक्कली दारी, नक्कली कपाल र पुरुषको कपडा लगाएर ती युवतीहरुको समूहले तेहरानको आजादी रङ्गशालाको सुरक्षा जाँचकर्ताहरुलाई झुक्याएका थिए । उनीहरु पर्सिएन खाडी प्रो लिगमा पर्सिपोलिसलाई समर्थन गर्न त्यहाँ पुगेका थिए ।
इरानमा सन् १९७९ को इस्लामिक क्रान्तिपछि महिलाहरुलाई रङ्गशालामा फुटबल खेल हेर्न प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । अधिकारीहरुका अनुसार उनीहरुलाई ‘अश्लिल वातावरण’बाट जोगाउन यो कदम चालिएको हो । भाइरल भएको एक तस्विरमा प्रतिक्रिया जनाउँदै एक सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले ‘उनीहरुले एक दिन आफ्नो असली पहिचानमा रङ्गशाला प्रबेश गर्न पाउन्’ भनेर लेखेकी छिन् ।
यो साहसी कदम परसेपोलिस र इस्टेग्हलालबीच हुन लागेको खेल हेर्न रङ्गशालामा पस्न लागेका ३५ महिलाहरु पक्राउ भएको तीन हप्तापछि चालिएको हो । त्यो घटनामा सरकारी अधिकारीहरुले महिलाहरुलाई रोकिएको मात्र, पक्राउ नगरिएको जनाइएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ताका अनुसार उनीहरुलाई ‘उपयुक्त स्थान’ मा लगेर छाडिएको थियो ।
अघिल्लो वर्ष पनि एक महिलाहरुको समूहले झुक्याएर रङ्गशाला पस्ने प्रयास गर्दा नियन्त्रणमा लिइएको थियो । तेहरान नगरका सुरक्षा प्रमुख अलिरेजा अदेलीले यस्तो घटना भएको यो पहिलो पटक नभएको बताए ।
‘विगतमा पनि युवतीहरुले रङ्गशाला प्रबेश गर्न खोजेका थिए ।’ उनले भने । साथै उनले महिलाहरुलाई ‘भीड’ र ‘अभद्र अवस्था’बाट जोगाउनका लागि भविष्यमा पनि नियन्त्रण जारी राखिने बताए । “यो प्रतिबन्ध उनीहरुको इज्जत बचाउनको लागि हो । किनकि रङ्गशालाको वातावरण, त्यहाँको उत्तेजना र भीड उनीहरुको लागि उपयुक्त ठाउँ होइन ।” उनले भने ।
“खेल हेर्न मन गरेका महिलाहरुले टीभीमा हेर्न सक्छन्, जसले सबै खेलहरुको प्रत्यक्ष प्रशारण दिन्छ ।” महिलाहरुलाई खेल कार्यक्रमहरुमा लगाइने प्रतिबन्धको विषयलाई समेटेर सन् २००६ मा ‘अफसाइड’ फिल्म बनाइएको थियो । समीक्षकहरुले निक्कै राम्रो मानेको त्यस फिल्ममा आजादी रङ्गशालामा बहराइनसँगको विश्वकप छनौट प्रतियोगिता खेल हेर्नका लागि केटीहरुको एक समूह केटाहरुको जस्तो भेष बनाएर रङ्गशाला पस्न खोज्दछन् ।
सुधारवादी मानिने हालका राष्ट्रपति हसन रुहानीले केही खेलमा महिलाहरुलाई प्रवेश दिन चाहन्छन् तर रुढीवादी तप्काबाट आलोचनाको डरले उनी महिलाहरुको लागि पूरुषहरुबाट अलग्गै स्थान बनाउन चाहन्छन् ।
PREVIOUS POST Previous post: श्रमिकका लागि के गर्दैछन् श्रम मन्त्री गोकर्ण बिष्ट ?
NEXT POST Next post: किन गर्छन मानिसले आत्म हत्या ? बरिष्ठ मनो चिकित्सक यसो भन्छन् (भिडियो सहित)
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते मंगलवार, बैशाख १८, २०७५ १२:१६
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस मंगलवार, बैशाख १८, २०७५ १२:१६
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण मंगलवार, बैशाख १८, २०७५ १२:१६
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी मंगलवार, बैशाख १८, २०७५ १२:१६
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? मंगलवार, बैशाख १८, २०७५ १२:१६